Ungaqonda kanjani uma othile asihlola kusuka kumakrofoni (i-PC ne-smartphone) 🥇 i-Emulator.online ▷ 🥇
Ubumfihlo obuhle sekuya kuba nzima ukukufeza, ikakhulukazi lapho sizungezwe amadivayisi kagesi akwazi ukuthatha nganoma yisiphi isikhathi konke esikushoyo noma imisindo ekhishwa yindawo esihlala kuyo noma esisebenza kuyo. Uma sikhathazeke kakhulu ngobumfihlo bethu futhi singafuni ukuzwakala noma ukusihlola ngombhobho we-PC noma i-smartphone yethu, kulo mhlahlandlela sizokukhombisa wazi kanjani ukuthi ngabe umuntu usinhloli ngombhobho, senza konke ukuhlola okudingekayo kuma-PC ethu e-Windows 10, kuma-Macs noma kuma-MacBooks ethu, kuma-smartphones ethu we-Android noma kumathebulethi naku-iPhones / iPads.
Ekupheleni kwesheke Sizoqinisekisa ukuthi asinazo izinhlelo zokusebenza "zezinhloli" noma izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa izimvume zokufinyelela kumakrofoni ngaphandle kwemvume yethu. (noma mhlawumbe bathole imvume yethu lapho beshesha, sisebenzisa ithuba lethu elingaphezulu).
FUNDA NONKE: Vikela ikhamera yewebhu ye-PC yakho nemakrofoni ukugwema ukuhlolelwa kuyo
Ungaqinisekisa kanjani ukusetshenziswa kwemakrofoni
Onke amakhompyutha anamuhla namadivayisi e-elekthronikhi anikela ngezinketho zokubheka ukuthi kukhona yini umuntu osinhloli ngombhobho: esimweni samanje sezindaba, kunzima ukuhlola imakrofoni ngaphandle kokuxhumana okuncane komsebenzisi (okufanele afake isicelo noma achofoze ku isixhumanisi esithile sokuqala ukuqala ukuhlola) noma ngaphandle kwamasu wokugenca asethuthuke kakhulu (kudingekile ukudlula izilawuli ezenziwa yizinhlelo zokusebenza). Konke lokhu kusebenza size sikhulume ngakho ukuthayipha ngocingo kwemveloKulezi zimo izindlela zokuhlola abantu zehlukene kakhulu futhi zisetshenziswa ngamaphoyisa ngokuyalelwa yinkantolo ukuba ihlole abasolwa.
Ungayihlola kanjani imakrofoni ngaphakathi Windows 10
Ku-Windows 10 singalawula ukuthi iziphi izinhlelo nezinhlelo ezikwazi ukufinyelela kumakrofoni ye-webcam noma (eminye imakrofoni exhunyiwe) ngokuvula imenyu yokuqala ngakwesokunxele esingaphansi, ngokuchofoza Ukuqinisekiswangokucindezela kwimenyu I-Intimidad nokuvula imenyu Imakrofoni.
Ukupheqa ewindini singabona izimvume zokufinyelela kumakrofoni zombili izinhlelo zokusebenza ezilandwe ku-Microsoft Store nezinhlelo zendabuko; Esimweni sokuqala, singakhubaza ukufinyelela kumakrofoni ngokumisa inkinobho eseduze negama lesicelo, ngenkathi esimweni sezinhlelo zendabuko kuzofanele sivule uhlelo ngokwalo futhi sishintshe ukumiswa okuhlobene nombhobho. Uma sifuna thola ubumfihlo obukhulu futhi ushiye ukufinyelela kumakrofoni kuphela kuzinhlelo zokusebenza "eziphephile", siphakamisa ukuthi ukhubaze iswishi eduze kwezinhlelo zokusebenza ezingekho emthethweni futhi khipha izinhlelo ezisolisayo noma esingazazi ukuthi zivela kubani. Ukujulisa lesi sici singafunda umhlahlandlela wethu Ungasusa kanjani izinhlelo ngesandla ngaphandle kokulandela noma amaphutha (iWindows).
FUNDA NONKE: Inhloli ye-PC bese ubona ukuthi abanye bayisebenzisa kanjani
Ungayihlola kanjani imakrofoni ku-Mac
Noma kusistimu yokusebenza ye-Mac ne-MacBooks, okungukuthi, i-MacOS, singabheka ukuthi kukhona yini umuntu osinhloli ngombhobho ngqo kusuka kuzilungiselelo. Ukuqhubeka sivula i-Mac yethu, sicindezela isithonjana se-Apple esilumayo engxenyeni engenhla kwesobunxele, sivula imenyu Izintandokazi zesistimuchofoza isithonjana Ukuphepha nobumfihlo, khetha ithebhu I-Intimidad futhi ekugcineni ake siye kumenyu Imakrofoni.
Ewindini sizobona zonke izinhlelo nezinhlelo ezicele ukufinyelela kumakrofoni. Uma sithola uhlelo noma uhlelo lokusebenza esingazi ukuthi luvelaphi noma okungafanele lube lapho, singasusa umaki oseduze negama lawo futhi, uma sesitholakele, singaqhubeka nokuyikhipha ngokuvula uhlelo. Isikhiphingokuchofoza kumenyu Aplicaciones ohlangothini lwesobunxele, ukuthola uhlelo lokusebenza lwe-spy futhi, ngokuchofoza ngakwesokudla kulo, uqhubeke ngokusula ngokucindezela Hambisa kudoti.
Ungayihlola kanjani imakrofoni ku-Android
Smartphones Android kanye amaphilisi bavame ukuba amadivayisi elula inhloli kusukela uhlelo lokusebenza aluhlali lusesikhathini ngaso sonke isikhathi Futhi, ngenxa yokusetshenziswa kwayo kabanzi, akuwona wonke umuntu ohlola ngokucophelela ukuthi ngabe izinhlelo zokusebenza ezifakiwe zihlola imakrofoni. Ukuhlola izinhlelo zokusebenza ezinemvume yokufinyelela kumakrofoni yedivayisi yethu, vula uhlelo lokusebenza Ukuqinisekiswaake siye kumenyu Ubumfihlo -> Ukuphathwa kokugunyazwa noma kumenyu Ukuphepha -> Izimvume bese ekugcineni ucindezela kumenyu Imakrofoni.
Esikrinini esivulayo, sizobona zonke izinhlelo zokusebenza ezicele ukufinyelela kumakrofoni noma ezinemvume kodwa okwamanje "ezingazuzanga". Uma siqaphela noma yiluphi uhlelo lokusebenza olungajwayelekile noma ukuthi asikhumbuli ukuthi silufakile, siqhubeka ngokususa ukusebenza kwemakrofoni (mane ucindezele inkinobho eseceleni kwegama lesicelo) bese ukhipha ngokushesha uhlelo olusolisayo, ukugwema ukwenziwa okulandelayo. Mayelana nalokhu singafunda umhlahlandlela wethu Khipha izinhlelo zokusebenza ze-Android ngokuphelele, ngisho konke ngasikhathi sinye.
Uma sifuna ukuba nolwazi olubonakalayo lwezinhlelo zokusebenza ezifinyelela kumakrofoni, noma singasebenzisi izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa ngokucacile imakrofoni, siphakamisa ukuthi ufake uhlelo lwamahhala lwe-Access Dots, olunikeza indawo encane ekhanyayo ekhoneni eliphezulu kwesokudla. noma kunini lapho uhlelo noma inqubo ifinyelela kumakrofoni nakwikhamera.
FUNDA NONKE: Hlola / hlola ifoni yomunye umuntu (i-Android)
Ungayihlola kanjani imakrofoni ku-iPhone / iPad
Ku-iPhone naku-iPad, ngokufika kwe- iOS 14, kwengezwe impendulo ebonakalayo ekufinyeleleni kwikhamera noma kumakrofoni: kulezi zimo kuzovela ichashazi elincane lewolintshi, elibomvu noma eliluhlaza ngaphezulu kwesokudla, ukuze wazi ngokushesha ukuthi ngabe kukhona umuntu osinhloli ngombhobho.
Ngaphezu kwalokhu kuqinisekiswa okusheshayo, singahlala silawula izinhlelo zokusebenza ezifinyelela imakrofoni kumadivayisi we-Apple ngokuvula uhlelo lokusebenza. Ukuqinisekiswa, ngokucindezela kwimenyu I-Intimidad, nokuqinisekisa mathupha izinhlelo zokusebenza ezifinyelela kumakrofoni, zikhubaza lezo esingazazi noma esingakaze sizifake. Ukukhulisa kakhulu ubumfihlo lapho usebenzisa i-iPhone, sikumema ukuthi ufunde umhlahlandlela Amasethingi obumfihlo ku-iPhone azovulwa ukuze avikelwe.
FUNDA NONKE: Ungayinhloli kanjani i-iPhone
Ukuhlola umbhobho kungenye yezinhloso eziyinhloko zabaduni, izinhloli noma abaseshi, futhi ngenxa yalesi sizathu izinhlelo zokusebenza sezikhetha kakhulu uma kuziwa ekunikezeni le mvume. Kuhlala kungcono ukubheka amamenyu nezinhlelo zokusebenza ezibonwe ngenhla, ukwazi njalo ukuthi kukhona yini umuntu osinhloli ngombhobho, mhlawumbe athola imininingwane yomuntu noma izimfihlo zezimboni.
Uma sesaba ukuba nesicelo senhloli ocingweni, sibheka ubukhona bezinhlelo zokusebenza ezibonwa emihlahlandlela yethu. Izicelo ezinhle zokuhlola amafoni omakhalekhukhwini (i-Android ne-iPhone) mi Uhlelo lokusebenza lwe-ejenti eyimfihlo ye-Android yokuhlola, ukulandelela izindawo, imiyalezo nokuningi.
Uma, ngokuphambene nalokho, sesaba ukuthi ukuhlola imibhobho kwenziwa ngamagciwane e-Android, siphakamisa ukuthi ufunde i-athikili Thola futhi ususe i-spyware noma i-malware ku-Android.
Finyelela izingqinamba nge-SPID: uzilungisa kanjani
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe uhlelo lwe-APK luyigciwane
Thola ukuthi ngabe ikhamera yakho noma ikhamera yewebhu intshontshiwe futhi yahlolwa yini
Ungayicela kanjani futhi uyithole kanjani i-SPID
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe othile usebenzise i-smartphone yami
Iyini i-malware futhi iyingozi kangakanani?
Izinhlelo zokuphepha zeMicrosoft zeWindows 10 no-7
Ungakuvimba kanjani ukufinyelela kumasayithi abantu abadala kusuka ku-PC, Mac, Smartphones kanye namathebulethi
Khiqiza amaphasiwedi angahleliwe, aqinile futhi azenzakalelayo ku-Chrome
Ungasusa kanjani ukuqoshwa kwezwi ku-Alexa nakuMsizi weGoogle
Ungasebenza kanjani ukusebenza kwe-webcam lapho uvula i-PC ngokuzenzakalelayo